ဂျွန် မက်ဝေါ်တား: စာသာကို ရိုက်နှိပ်မှုက ဘာသာစကားကို သတ်ပစ်မှုပါပဲ။ JK!!! - English-Video.net
ဂျွန် မက်ဝေါ်တား: စာသာကို ရိုက်နှိပ်မှုက ဘာသာစကားကို သတ်ပစ်မှုပါပဲ။ JK!!!
စာသားကို ရိုက်နှိပ်မှုဟာ တကယ့်ကိုပဲ စာကို ကောင်းမွန်စွာ ရေးတတ်မှုကို သတ်ပစ်နေတာလား။ ဂျွန် မက်ဝေါ်တားရဲ့ ယူဆချက် အတိုင်း ဆိုရင်တော့ အဲဒီလို စာသားကို ရိုက်နှိပ်မှုထဲမှာ၊ ဘာသာစကား ရှုဒေါင့်အရရော၊ ယဉ်ကျေးမှု ရှုဒေါင့်အရပါ၊ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒါတွေဟာ သတင်းကောင်းတွေလို့ ထင်စရာ ရှိပါတယ်။
စာသားရိုက်နှိပ်မှုဟာ ကပ်ဆိုးကြီး တစ်ခုပဲလို ပြောသံံတွေကို ကျွန်တော်တို့ တချိန်လုံး ကြားနေရပါတယ်။
အဲဒီလို စာသားကို ရိုက်နှိပ်မှုဟာ စာကြီးပေကြီး ရေးသားမှု ကျဆုံးလာခြင်းကို
ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံးအားဖြင့် စာရေးသားမှု စွမ်းရည်ကို
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုထဲက လူငယ်တွေ အကြားမှာ
အခုတော့ ဒီနေ့မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကျဆင်းလာစေနေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
လက်တွေ့မှာကျတော့ အဲဒီလို ယူဆချက်ဟာ မမှန်ပါဘူး၊
တကယ်တော့ အဲဒါဟာ မှန်တယ်လို့ အလွယ်စလို ထင်နေကြတာပါ၊
ဒါပေမယ့် ဒါကို ကျွန်တော်တို့က နောက်ရှုဒေါင့် တစ်ခုုမှ မြင်လိုကြပါက၊
စာသားရိုက်နှိပ်မှုကို တကယ်တမ်းတွင် အံ့သြစရာကြီး တစ်ခုအဖြစ် မြင်လိုရင်၊
အားမာန်ပါတဲ့ အံ့သြဖွယ် အရာတစ်ခုသာမက၊
ရှုပ်ထွေးခက်ခဲလှတဲ့ အချင်းအရာ အဖြစ် ထင်ရှားလာနေခြင်းကို
အခုလက်ရှိ အချိန်မှာကို ဖြစ်ပျက်နေတာကို မြင်တွေ့လိုကြပါက၊
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကင်မရာကို နည်းနည်းလေး နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လျက်
ဘာသာစကား ဆိုတာ တကယ်တမ်းမှာ ဘာများပါလိမ့် ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့၊
အဲဒီလိုသာဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခု မြင်ကြရမှာက
အဲဒီလို စာသားရိုက်နှိပ်မှုဟာ စာရေးသားမှု လုံးဝ မဟုတ်ဘူး။
ဒိလို ပြောလိုက်ခြင်းက ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ။
အခြေံကျကျ ပြောရသော်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘာသာစကား အကြောင်း စဉ်းစားလိုက်ပြီ ဆိုရင်၊
ဘာသာစကားဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ၀၀၀ ခန့်၊
အနည်းဆုံးအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၈၀၀၀၀ ခန့် ရှိလာခဲ့ပြီနဲ့ တူပါတယ်၊
အဲဒါ စတင်ခဲ့တာက စကားပြောဆိုမုှုမှ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီအချက်ကမှ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်လက္ခဏာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဘာသာစကားကို အများဆုံး သုံးကြတာက အဲဒီလိုပါ။
ရေးသားခြင်း အတတ်ကျတော့ များစွာမှ နောက်ကျပြီးမှ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်၊
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ ပြောဆိုမှုထဲ မြင်ခဲ့ကြရသလို၊
စာရေးသားမှု အတတ် စပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း အချိန်ကာလနှင့် ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားစရာ ရှိပေမဲ့၊
အစဉ်အလာ ခန့်မှန်းမှုများ အရ၊
လူသားတွေ ပေါ်ပေါက် ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ သက်တမ်းဟာ ၂၄ နာရီ ကြာသွားပြီလို့ သတ်မှတ်လိုက်ရင်၊
စာရေးမှု အတတ်ဟာ ညပိုင်း ၁၁ နာရီ ၀၇ မိနစ်တုန်းကမှသာ ပေါ်လာခဲ့တာပါ။
ဒီတော့ စာရေးသားမှု ဆိုတာ သိပ်ကို နောက်ကျပြီးမှ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ အရာပါ။
ဒီတော့ နှုတ်စကား ဆိုတာ အရင် ပေါ်လာခဲ့တယ်၊ ပြီးမှ စာရေးသားမှု လိုက်ပါလာခဲ့တာ
နောက်ပိုင်း တီထွင်မှု တစ်ခုပါ။
ဒါပေမယ့်၊ ကျွန်တော့်ကို တလွဲမထင်မိစေလိုပါ၊ စာရေးသားခြင်းမှာ အချို့ သော တစ်ပန်းသာမှုတွေ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စာရေးကြတဲ့ အခါမှာ၊ အသိစိတ်ဖြင့် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တာမို့၊
ကျွန်တော်တို့ လိုချင်ရင် နောက်ကို ပြန်ကြည့်နိုင်ကြတယ်၊
စကားပြောနေစဉ် လုပ်ဖို့ မလွယ်တဲ့ အရာတွေကို
ဥပမာ၊ အက်ဒွပ် ဂီဘွန်းရဲ့ လက်ရာထဲက စာပိုဒ် တစ်ပိုဒ်ကို စိတ်ကူးကြည့်ကြည့်ပါ
"The Decline and Fall of the Roman Empire:" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှ ယူထားတာပါ။
"ထိုတိုက်ပွဲ တစ်ခုလုံးသည် ဆယ့်နှစ်နာရီ ကျော်မျှသာ ကြာခဲ့သည်။
ပါရှား လူမျိုးများ၏ မသိမသာ နောက်ဆုတ်မှုသည်
ဖရိုဖရဲ ပြေးလွှားမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲမသွားမီ ကာလအထိ
ထိုအကြောင်းစုံံကို အဓိကရ ခေါင်းဆောင်များ ကိုယ်တိုင် နှင့် ဆူရဲနာစ် ကိုယ်တိုင် ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့ကြသည်။"
ရေးသားထားပုံ တကယ့်ကို လှပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ အဲဒီလို မပြောကြဘူး။
ဒါမှမဟုတ်၊ အနည်းဆုံးအားဖြင့်၊ အဲဒါကို သူတို့ နားလည်စေချင်ရင်
အဲဒီလို မပြောသင့်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ --
လူသား တစ်ယောက်ဟာ နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ အဲဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့ မပြောတတ်ပါဘူး။
နေ့စဉ်ဘဝထဲက ပြောစကားဟာ တော်တော်လေးခြာနားပါတယ်။
ဘယ်သူမှ စောင့်ကြည့်ခြင်း မရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲမှာ
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ဘဝဆိုင်ရာများကို ပြောဆိုကြရာမှာ
ကျွန်တော်တို့ဟာ စကားလုံး ခုနစ်လုံး မှ ဆယ်လုံးအထိ ရှိတဲ့ စကားလုံးစုများဖြင့် ပြောဆိုလေ့ ရှိကြတာကို
ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်များက သက်သေထူပြထားကြပါပြီ။
မိတ်ဆွေတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒါမှမဟုတ် လူတစ်စု ပြောနေတာကို အသံသွင်း လေ့လာခဲ့ရင်
နှုတ်ပြော စကားက အဲဒီလို ရှိပါတယ်။
နှုတ်စကားဟာ လျော့ရဲရဲ ရှိပါတယ်။ ကြေးနန်းစာနဲ့ ပိုတူချင်ပါတယ်။
ဆင်ခြင်မှု နည်းကာ စာရေးခြင်းနဲ့ အတော့်ကို မတူကွဲပြားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ရေးထားတဲ့ စာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် စဉ်းစားချင်ကြပါတယ်
ဘာသာစကား ဆိုတာကိုက အဲဒီလို ဖြစ်တာမို့လို့ပါ၊
ဒါပေမဲ့၊ တကယ့်တကယ်ကျတော့၊ ဘာသာစကားဆိုတာ နှုတ်ပြော စကားပါပဲ။ စဉ်းစားစရာ နှစ်ခု ရှိပါတယ်။
သမိုင်းတလျှောက်ကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်
နှုတ်စကား နဲ့ စာရေးခြင်း တို့အကြားမှာ
တိုက်ပွဲတွေ အများကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့တကာ စီးခဲ့ရတဲ့ သွေးတွေ မနည်းခဲ့ပါဘူး။
ဒီတော့၊ ဥပမာ၊ မကြာသေးတဲ့ ခေတ်တုန်းက
အခြေခံအားဖြင့် စာရေးတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြောခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ မိန့်ခွန်း ပုံစံက
ရုပ်ရှင်ဟောင်းတွေကို ကြည့်ကြတဲ့ အခါမှာ၊ လည်ချောင်းကို ရှင်းပစ်လိုက်တဲ့ နောက်
"အမ်၊ လေးစားအပ်သော ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ ခင်ဗျာ" ဖြင့် အစချီလျက်
မိန့်ခွန်းကို ချွေခဲ့ကြပါတယ်၊ တကယ်တမ်းတွင် အဲဒါဟာ ပြောနေကျ စကားနဲ့ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။
အဲဒါဟာ သမရိုးကျ ပုံစံဆန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒီမှာ မြင်နေကြရတဲ့ ဂီဘွန်ရဲ့ စာတမ်းထဲကလို ဝါကျ အရှည်ကြီးတွေကို သုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာ စာရေးတဲ့ ပုံစံကို လိုက်ပြီး နှုတ်ကနေ ပြောခြင်းသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ လင်ကွန် အကြောင်း အတော်ကလေး စဉ်းစားပြောဆိုနေကြပါတယ်၊
Gettysburg Address လို့ခေါ်တဲ့ မိန့်ခွန်းဟာ အဲဒီတုန်းက အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ရပ် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီ မတိုင်မီ နှစ်နာရီတုန်းက Edward Everett ဆိုသူဟာ
အကြောင်းအရာ တစ်ခုနဲ့ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အဲဒီ အကြောင်းအရာကို
ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဝင်စားကြမှာ မဟုတ်သလို၊ ထိုစဉ်တုန်းကလည်း စိတ်မဝင်စားခဲ့ကြပါဘူး။
ကျွန်တော် ထောက်ပြချင်တာက၊ စာရေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြောကြားသွားတာကို
သာမန် ပြည်သူတိုတွေဟာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး အဲဒါကို နှစ်နာရီခန့် နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒါဟာ လုံးဝကို သဘာဝကျခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက လူတွေအားလုံးဟာ စာရေးသလိုပဲ မိန့်ခွန်း ပေးခဲ့ကြတာပါ။
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့က စာရေးသလို ပြောဆိုကြတယ်ဆိုတော့၊
စာရေးနိုင်ဖွယ်ရာကော မရှိနိုင်ဘူးလားလို့ မေးစရာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
တကယ့် ပြဿနာက ဒြပ်ဝတ္ထုရဲ့ သဘာဝနဲ့၊
စက်ပစ္စည်းရဲ့ သဘောအရ၊ အဲဒီခေတ်မှာတုန်းက ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။
ရှိခဲ့ကြတဲ့ အရာဝတ္ထုများက သူတို့ကို အဲဒီလို လုပ်နိုင်ခွင့်ကို အလောက်အကူမပေးခဲ့ကြလို့ပါ။
အဲဒါကို ကျွန်တော်ရဲ့ လက်တွေနဲ့ချည်း လုပ်ဖို့ဆိုတာ၊ လက်ရေးတိုသမားသာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊
မလွယ်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဆက်သွယ်ရေး အလားအလာဟာလည်း ကန့်သတ်ချက် ရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်နဲ့ ရိုက်ရတဲ့ လက်နှိပ်စက်နဲ့ ဆိုရင် သိပ်ကို ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်၊
လျှပ်စစ် လက်နှိပ်စက်တွေ ပေါ်လာခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းမှာ
ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ် ပေါ်လာခဲ့တာတောင်မှ ခဲယဉ်းခဲ့ပါသေးတယ်၊
လက်တွေ့မှာတော့ သင်ဟာ နှုတ်ပြော နှုန်းအတိုင်း တိုက်ရိုက်နိုင်တာတောင်
သင်ရဲ့ သဝဏ်လွှာကို လျင်မြန်စွာ လက်ခံယူနိုင်မယ့် သူလည်း
ရှိနေရန် လိုအပ်ခဲ့တာကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အဲဒီလို သဝဏ်လွှာကို လက်ခံယူနိုင်မယ့် အရာတွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ရှိလာတဲ့ အခါမှာတော့၊
ကျွန်တော်တို့ဟာ စကားပြောသလို စာရေးနိုင်လာတဲ့
အခြေအနေတွေ ရရှိလာကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကျမှ စာသားရိုက်နှိပ်မှုဆိုတာ ပေါ်လာရပါတယ်။
ဒီတော့၊ စာသားရိုက်နှိပ်မှုဟာ တည်ဆောက်မှု ပုံစံ အရကိုက လျော့ရဲရဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို စာသားကို ရိုက်နှိပ်နေစဉ်မှာ ဘယ်သူမှာမှ စာလုံး အကြီးအသေး ဒါမှမဟုတ် ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်မ စတာတွေကို စဉ်းစာမနေတော့ပါ၊
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စကားပြောကြတဲ့ အခါမှာလည်း အဲဒါတွေ အကြောင်းကို စဉ်းစားကြပါသလား။
မစဉ်းစားကြပါဘူး၊ ဒီတော့ စာသားကို ရိုက်နှိပ်တဲ့ အခါမှာရော ဘာဖြစ်လို့ စဉ်းစားရမလဲ။
ဒီတော့၊ အဲဒီလို စာသားကို ရိုက်နှိပ်မှုဟာ၊
အဲဒီထဲမယ် စာရေးခြင်းနဲ့ ဆင်တူတဲ့ လှုပ်ရှာမှု တချို့ ရှိနေတာတောင်၊
လက်ရေး နှုတ်စကားပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ စာသားကို ရိုက်နှိပ်မှုရဲ့ သဘာဝဟာ အဲဒီလိုပါ။
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စကားပြောသလို ရေးလို့ရလာပါပြီ။
အဲဒီအချက် ကိုယ်နှိုက်ကိုက သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့၊
အဲဒါဟာ ကျဆင်းမှု တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ အလွယ်တကူ ထင်မြင်စရာ ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ တည်ဆောက်ပုံ တစ်ခုလုံး လျော့ရဲရဲ ဖြစ်နေခြင်း၊
စည်းစနစ်တွေ နည်းပါးနေလို့ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေခြင်း၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကသင်ပုန်းကြီးနဲ့မှ သင်ယူခဲ့ကြတဲ့
အလေ့အကျင့် ရှိနေခြင်းတို့နဲ ပေါင်းလိုက်တော့
တစ်ခုခုတော့ လွဲမှားနေပြီလို့ ထင်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
သိပ်ကို သဘာဝကျတဲ့ တွေးခေါ်မှုပါ။
တကယ် လက်တွေ့မှာကျတော့ အခု့ဖြစ်ပျက်လာနေတဲ့ အရာဟာ
ပေါ်ထွန်းစ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချင်းအရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဖက်က ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် လက်ချောင်း နှုတ်စကားထဲမှာ အဲဒီလို မြင်လာကြပါမယ်။
အဲဒါကို နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တုုိ့ ကြည့်ချင်တာက
အဲဒီ ဘာသာစကား ပုံစံအသစ်ရဲ့
ဖွဲ့စည်းပုံ အနေအထားကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ဥပမာ တစ်ခုအဖြစ် စာသားကို ရိုက်နှိပ်မှုထဲက
LOL ဆိုတဲ့ တီထွင်မှုကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ LOL ဟာ၊ "laughing out loud" ဆိုတဲ့
ပြောစကားကနေ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သီဝရီအရ အဲဒီလို ဟုတ်တာတော့ မှန်ပါတယ်၊
အရင်တုန်းက အဲဒီလို စာသားတွေကို ယူကြည့်ကြမယ် ဆိုရင်
လူတွေဟာ တအား ရယ်ချင်လိုတဲ့ အခါမှာ တကယ်ပဲ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့၊ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့က စာသားကို ရိုက်နှိပ်ကြတဲ့ အခါမှာ၊ ဒါမှမျမဟုတ် သင်ဟာ အဲဒီလို
အသုံးအနှုန်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပုံ သမိုင်းကြောင်းကို သိထားသူ ဖြစ်တယ် ဆိုရင်၊
အဲဒီ LOL ဟာ အခုတော့
တအား ရယ်ချင်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ သဘောမဆောင်တော့တာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
ဒီအရာဟာ ပိုလို့ကို သိမ်မွေ့တဲ့ သဘောရှိနေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ဟာ တကယ့် လက်တွေ့ စာသား တစ်ခုကို ပြချင်ပါတယ်၊
အသက် ၂၀ ခန့်ရှိတဲ့ အမျိုးသား မဟုတ်သူ တစ်ယောက်
မကြာခင်လေးတင်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ အထဲကပါ။
"စကားမစပ်၊ နင်သုံးတဲ့ စကားလုံးပုံစံကို ငါတော့ ကြိုက်တယ်၊"
ဂျူလီ: "lol ကျေးဇူးပဲ၊ ဂျီမေးလ်ဟာ အခု နှေးလာနေပြီ"
အဲဒီအကြောင်းကို အခု ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားကြည့်မယ် ဆိုရင် ရယ်စရာလုံးဝ မဟုတ်ပါ။
ရယ်နေသူ တစ်ယောက်မှ မရှိပါ။ (ရယ်မောသံများ)
ဒါတောင်၊ အဲဒါကို အဲဒီမှာ တွေ့နေရပါတယ်၊
ဒီတော့ အဲဒီမှာ တစ်ခုခုတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။
အဲဒီနောက်မှာ ဆူဇန် ပြောလိုက်ပုံက "lol၊ ငါသိပါတယ်၊"
ထပ်ပြီးတော့၊ အဲဒီလို အဆင်မပြေမှုတွေ အကြောင်းကို ပြောဆိုနေစဉ်မှာ
ရယ်မောရမှာထက်ကို ပိုလို့ကို ရယ်မောချင်နေကြသလို ထင်ရပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ဂျူလီက၊ "ငါခုလေးတင် နင့်ဆီကို အီးမေးလ် ပို့လိုက်တယ်။"
ဆူဇန်: "lol၊ ငါ အဲဒါကို မြင်တယ်။"
တကယ့်ကို ထူးဆန်းတဲ့ သူတွေပါပဲ၊ ဒါတွေဟာ LOL ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဆိုင်လို့လား။
ခုနက ဂျူလီက၊ "အဲဒါ ဘာဖြစ်သွားလဲ။"
Sဆူဇန်: "lol၊ ငါစာရွက် ၁၀ရွက်ရှိတဲ့ စာတမ်းကို ရေးရမှာ။"
သူမဟာ ရယ်မော မနေပါ။ ဒီအကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။
LOL ကို သူတို့ အသုံးပြုပုံဟာ အတော့်ကို ထူးဆန်းနေပါတယ်။
အဲဒါဟာ ခင်မင်မှုကို ပြတဲ့ အချက် ဖြစ်တယ်။ တစ်ဖက်သား ကို လိုက်လျောပေးလိုတာကို ပြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်တွေက အဲဒီလိုဟာမျိုးကို လက်တွေ့ကျတဲ့ နိပါတ်ပုဒ်များလို ခေါ်ပါတယ်။
ဘယ် နှုတ်ပြော စကားထဲမှာမဆို တကယ့်လူသားက ပြောရိုးမှန်ရင် အဲဒါတွေ ပါတတ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ အထဲမှာ ဂျပန်လို ပြောတတ်သူ ရှိရင်၊ "နေ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး အကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ၊
ဝါကျတော်တော်များများရဲ့ အဆုံးမှာ အဲဒါကို အတော်ကလေး သုံးပါတယ်။
တကယ်လို့များ လူမည်း လူငယ်တွေ ဒီနေ့ စကားပြောဆိုကြပုံကို နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း၊
သူတို့က "ယို" ဆိုတဲ့ အသံကို သုံးကြပုံကို စဉ်းစာကြည့်ပါ။
အဲဒီ အကြောင်းကို ဘွဲ့ယူစာတမ်းကြီးတွေကို ပြုစုလို့ ရနိုင်ပါတယ်၊
ရေးလည်း ရေးနေကြပြီနဲ့ တူပါတယ်။
ဒီတော့ LOL ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဲဒီလို လက်တွေ့ကျတဲ့ နိပါတ်ပုဒ် တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
တကယ့် လူသားတွေက စကားပြောကြတဲ့ အခါမှာ အဲဒီလို သုံးနှုန်းတတ်ကြပါတယ်။
နောက် ဥပမာ တစ်ခုက "slash" ပါပဲ။
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ slash ကို လက်တွေ့မှာ အတော်ကလေး သုံးနေကြပြီ ဖြစ်ရာ၊
"ကျွန်တော်တို့ဟာ ပါတီပွဲ-slash-ကွန်ယက် တွေ့ဆုံပွဲကို
သွားကြတော့မလို" ဆိုပြီး သုံးနှုန်း ပြောဆိုကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲဒီလို သုံးနှုန်းရတာကို နှစ်ကြိုက်ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ လူငယ်တွေ စာကို ရိုက်နှိပ်ကြရာမှာ အဲဒီ slash ကို
သုံးကြပုံဟာ လုံးဝတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ အဲဒါကို သုံးကြပါတယ်။
ဥပမာ ပြရမယ်ဆိုရင်၊ စဲလီ ဆိုသူက၊
"ငါတော့ အချိန်ဖြုန်းဖို့အတွက် လူတွေကို ရှာရမယ်"
အဲဒါကို ဂျက် ဖြေပုံက၊"ဟာဟာ" --
ခုနက ကြားလိုက်ရတဲ့ "Haha" အကြောင်းကိုလည်း ဘွဲ့ယူစာတမ်း တစ်ခု ရေးမယ်ဆို ရေးနိုင်မှာပါ၊ အဲဒါအတွက် အချိန် ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ —
"ဟာဟာ ဒီတော့ နင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သွားမှာလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။"
စဲလီ: "NYU က ဒီနွေရာသီ ပရိုဂရမ်အတွက်ပါ။"
ဂျက်: "ဟာဟာ။ Slash ငါကတော့ ဆန်းစ် ကစားကြသူတွေနဲ့အတူ ဗီဒီယိုကို ကြည့်နေတယ်၊
မှေးရင်းနဲ့ မျက်လုံး တစ်ဖက်နဲ့ ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။"
ဒီတော့ အဲဒီ slash ဟာစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဂျက် ပြောလိုက်တာက ဘာကိုဆိုလိုမှန်း ကျွန်တော် တကယ် နားမလည်ပေမဲ့၊
သူဟာ အကြောင်းအရာကို ပြောင်းလိုက်တာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ကြရပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒါဟာ အားလုံး သိရှိလက်ခံလာကြပါတယ်၊
ကျွန်တော်တို့တွေ လက်တွေ့ဘဝထဲကို ပြန်သွားကြည့်ရအောင်၊
ကျွန်တော်တို့က စကားပြောဆိုနေစဉ်မှာ အကြောင်းအရာကို ပြောင်းလဲချင်ကြရင်၊
အဲဒါကို ယဉ်ကျေးစွာ လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ချက်တည်းနဲ့ ပြောင်းလွဲလိုက်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်ဟာ သင့်ပေါင်တွေ ပုတ်နေရင်းနဲ့ အဝေး တစ်နေရာကို မျှော်ကြည့်နေမယ်၊
ဒါမှမဟုတ်၊ "ဟင်၊ မင်း ထင်နေတာက --" စသဖြင့် ပြောပါလိမ့်မယ်၊
တကယ်တမ်းမတော့ ထိုသူဟာ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ သင်က တကယ် လုပ်ချင်တာက --
သင်ဟာ တကယ်တမ်းမှာ အကြောင်းအရာကို ပြောင်းပစ်လိုပါတယ်။
စာကို လက်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်နေစဉ် အဲဒီလို လုပ်မရနိုင်ပါ၊
အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလို စနစ် အတွင်းမှာပါ သုံးလို့ ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ပေါ်လာနေနေကြပါတယ်။
နှုတ်ပြော ဘာသာစကား အားလုံးတို့ထဲမှာ၊ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်တွေက
အချက်အလက်ပြ မှတ်သားစရာ အသစ်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ အရာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ရှိနိုင်ပါတယ်။
စာသားကို ရိုက်နှိပ်မှုက ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ slash ကနေပြီးတစ်ခုကို တီထွင် ယူလိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ ရေးသားဖွဲ့စည်းမှု ပုံစံတွေ တသီကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှောက်မှာကို
တိုးတက်ပေါ်ပေါက်လာနေကြကာ ဆက်ပြီးတော့လည်း ပေါ်ပေါက်လာကြဦးမှာ ဖြစ်ပေမဲ့၊
တစ်ခုခုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ ထင်စရာ ရှိနေတုန်းပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံထဲမယ် အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
အဲဒါဟာ သိမ့်မွေ့နူးညံ့မှု မရှိသေးပါ။
The Wall Street Journal ထဲက ဘာသာစကားမျိုး မဟုတ်သေးပါ။.
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့က လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာလိုကြပါက၊
၁၉၅၆ ခုနှစ်တုန်းက ဒီလူကို ကြည့်ကြည့်ပါ၊
အဲဒါဟာ စာသားကို ရိုက်နှိပ်ရမှု မရှိခဲ့စဉ်တုန်းကပါ၊
"ငါ လူစီကို ချစ်တယ်" စာသားမျိုး အားလုံးအသိပါ။
"လူ တော်တော်များက သင်ပုန်း မကျေခဲ့ကြပါ၊ အလီတိုင်ဇယားကို မသိခဲ့ကြပါ၊
သဒ္ဒါနည်းကျစွာ မရေးတတ်ခဲ့ကြပါ -- "
ပြီးတော့ အဲဒီလို အရာမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ဟာ
၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာတင်မက၊ အဲဒီအရင် ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှာလည်း ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။
၁၉၁၇။ အဲဒီ ခေတ်တုန်းက စာရေးခြင်း ကိစ္စထဲမှာ အားလုံးဟာ စနစ်ကျခဲ့တယ် ဆိုပြီး
ဒီနေ့တွင် ကျွန်တော်တို့က ထင်မှတ်နိုင်ကြပါတယ်၊
"Downton Abbey" မှာ နေထိုင်ခဲ့ကြသူတို့ဟာ စကားပြောရာတွင် သိပ်ကို တော်ခဲ့ကြတယ်၊
စသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ယူဆလာခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့လို့၊ "နိုင်ငံ့ထဲက ကောလိပ်ကျေင်းတိုင်းမျာ ငိုယိုသများကို ကြားနိုင်သည်၊
'ကျွန်တော်တို့၏ ကျောင်းသား အသစ်များသည် အသံထွက် မပြောနိုင်၊ စားလုံးပေါင်း မမှန်နိုင်ပါ။'"
အလားတူ အရာတွေ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲဒီထက်ကို ပိုစောတဲ့ ကာလဆီကို သွားလို့ ရပါသေးတယ်။
ဒါကတော့ သမ္မတ ဟားဝါဒ် ပါပဲ။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်ပါ။
လျှပ်စစ်ဆိုတာ မရှိသေးပါ။ လူတွေဟာ အကြောင်းအရာ သုံးခုကိုသာ ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။
"စာကို ရေးသားရာတွင်၊ စာလုံး မပေါင်းတတ်ဘူး၊
စာကို စီကာ ရေးဖွဲ့ရာတွင် မမှန်ကန်ဘူး၊ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ မရှိဘူး။"
သူ ပြောနေတာက ကောလိပ်ကျောင်းမှာ
စာကို သင်ယူဖို့ ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်ပြီးသား သူတွေ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သွားချင်သေးရင် နောက်ထပ် ပိုစောတဲ့ ခေတ်ကို သွားလို့ ရပါသေးတယ်။
၁၈၄၁ ခုနှစ်၊ ကျောင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ အုပ်ချုပ်နေရသူဟာ များစွာမှ စိတ်ပျက်နေပါတယ်
သူဟာ အချိန်အတော်ကြာအောင်ကိုပဲ "မူရင်းစာသားကို လုံးဝနီးပါးကို ဂရုမစိုက် နားမလည်မှုကို
မြင်နေရခြင်းဟာ စိတ်ပျက်စရာကြီး ဖြစ်ရပါတယ်" စသဖြင့် ညည်းညူး ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဟာ အေဒီ ၆၃ ခုနှစ်ဆီကို တောင် သွားနိုင်ပါတယ်-- (ရယ်မောသံများ) --
အဲဒီမှာလည်း စိတ်ပျက်နေခဲ့ရသူ တစ်ဦးကို မြင်နိုင်ကြပါတယ်၊
လူတွေ လက်တင် ဘာသာစကားကို ပြောဆိုကြပုံကို အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်နေခဲ့သူပါ။
သူပြောနေတဲ့ဟာက နောက်ပိုင်းမယ်ကျတော့ ပြင်သစ် စကားဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီတော့၊ အမြဲတမ်းလိုလိုပဲ — (ရယ်မောသံများ) (လက်ခုပ်တီး အားပေးသံများ) —
အဲဒီလို အရာတွေ အကြောင်းကို စိုးရိမ်ပြောဆိုကြမယ့် သူတွေဟာ အစဉ်ပဲ ရှိနေမှာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးကတော့ လည်မြဲလည်ပတ်လျက် ရှိနေဆဲပါ။
ဒီတော့ကား၊ ဒီနေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ မြင်နေကြရတဲ့ စာသားကို ရိုက်နှိပ်နေကြတာကို စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ အခု တွေ့မြင်နေရတာဟာ လုံးဝကို အသစ်ဖြစ်တဲ့ ရေးသားနည်း တစ်ခု ဖြစ်တယ်၊
လူငယ်တွေက တီထွင်ပြုစုလျက် တိုးတက်အောင် လုပ်နေကြတယ်၊
အဲဒါကို သူတို့ဟာ အစဉ်အလာ ရေးသားမှုကိစ္စနဲ့ ယှဉ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေကြခြင်း ဖြစ်တယ်၊
အဲဒီလိုဆိုတော့ သူတို့ဟာ အလုပ်နှစ်မျိုးကို လုပ်နိုင်ကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲဒါဟာ ဘာသာစကား နှစ်မျိုးကို သုံးစွဲမှုဖြစ်တဲ့ အထောက်အထားတွေ တိုးလာနေတယ် ဆိုတော့၊
ဆင်ခြင်မှု အသိတရား အတွက်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်။
အဲဒါဟာ တနည်းပြောရရင် ဒေသိယစကား နှစ်မျိုးတတ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ်ပါပဲ၊ ရေးသားတဲ့ ပုံစံကို လေ့လာကြည့်ပြီး ပြောရပါက အဲဒါဟာတကယ့်ကို ဒေသိယစကား နှစ်မျိုးပါ။
ဒါကြောင့်မို့လို့၊ စာသားကို ဒီလို ရိုက်နှိပ်မှုဟာ လက်တွေ့မှာကျတော့
ဒီနေ့လူငယ်တွေက၊ သိရှိနားလည်တဲ့ စိတ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေကြတာ မဟုတ်တောင်၊ ဘဝရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို
ချင့်ချိန်လျက် သူတို့ရဲ့ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုပညာကို တိုးချဲ့ဖို့ ကြိုးစားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူ တစ်ဦးက
၁၉၉၃ ခုနှစ်တုန်းက ကျောင်းသား အဆောင် တစ်ခုထဲက ကြော်ငြာ သင်ပုန်း ပေါ်က ရေးသားချက် တစ်ခုကို မြင်လိုက်ရတဲ့ အခါမှာ
သုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံးတွေ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်၊
"အချစ် ဝတ္ထု" ခေတ်နဲ့ စာရင်ပေါ့လေ၊
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ သင်ပုန်းပေါ်မှာ ရေးထားခဲ့တာကို နားလည်နိုင်စွမ်း ရှိခဲ့မှာပါ။
အခု တစ်ဖန် သိပ်မကြာသေးတဲ့ 1993 တုန်းကမွေးခဲ့သူကို ယူလိုက်ပါ၊
"Bill and Ted's Excellent Adventure" စာအုပ်ခေတ်တုန်းက သူတွေကို ယူလိုက်ပြီး၊
ဒီနေ့ အသက် ၂၀ ရှိသူ တစ်ဦး ရေးထားတဲ့ သာမန် စာသားလေးကို ပေးဖတ်ကြည့်ပါ။
အဲဒါရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က ဘာကိုဆိုလိုမှန်း သူတို့တွေ လုံးဝကို မသိနိုင်ဖို့ များပါတယ်၊
လုံးဝကို အသစ်ဖြစ်တဲ့ ဘာသာစကားဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လို့ပါပဲ၊
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူငယ်တွေ အားလုံး သူလိုငါလို လုပ်နေကြတဲ့ကိစ္စပါ၊
ကျွန်တော်တို့ အမြင်ထဲမှာ သူတို့ လက်ထဲက ကိရိယာ အသေးလေးတွေနဲ့
ဆော့ကစားနေကြတယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတဲ့ ထဲကနေပြီး ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ ဘာသာစကားပါပဲ။
ကောင်းပြီ၊ နိဂုံးချုပ်တဲ့ အနေနဲ့၊ ကျွန်တော်ဟာ အနာဂါတ်ဆီကို သွားနိုင်ခဲ့ရင်၊
ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၃၃ ခုနှစ်ဆီကို သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊
ပထမ အချက်အနေနဲ့ ကျွန်တော့အနေနဲ့ David Simon ဟာ
"The Wire." ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇာတ်လမ်းကို ရေးဖြစ်ခဲ့သလားကို မေးပါမယ်။
ပြီးတော့၊ အဲဒါကို တကယ် မေးပြီးတဲ့ေနောက်မှာ
"Downton Abbey" မှာဘာတွေ ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို တကယ်ပဲ သိရှိလိုပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါက ဒုတိယ အချက် ဖြစ်ပါမယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ၁၆ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက်
ရေးထားတဲ့ စာသား အတိုလေးကို ပြပါလို့ တောင်းုကြည့်မှာပါ၊
ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ထဲမှာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့ ဒီဘာသာစကားဟာ
ဘယ်ဆီကို တိုးတက် ပြောင်းလဲလာခဲ့သလဲ ဆိုတာကို သိချင်လို့ပါပဲ၊
လုပ်လို့ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက၊ အဲဒါကို ခင်ဗျားတို့ဆီကို၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆီကို၊ ပြန်ပို့ပေးချင်ပါတယ်၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာပဲ ဒီနေ့ ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာနေတဲ့
လက်ရှိ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ရာ အချင်းအရာကို ကျွန်တော်တို့ ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ဖို့ အတွက်ပါ။
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ (လက်ခုပ်တီးအားပေးသံများ)
ဂျွန် မက်ဝေါ်တား: စာသာကို ရိုက်နှိပ်မှုက ဘာသာစကားကို သတ်ပစ်မှုပါပဲ။ JK!!! | TED Talk | TED.com